Waraysi Madaxweyne Gaas – Qaybtii 1aad (Dhegayso) – Radio Daljir
Waraysi Madaxweyne Gaas – Qaybtii 1aad (Dhegayso)
Maajo 1, 2017 2:45 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ oo wareysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladaha kala duwan ee Puntland siiba xagga hormarka.
Madaxweynaha Gaas ayaa wareysigiisaas oo ahaa mid dheeraa si durugsan uga warramay badankiisa hormarinta guud ee Puntland sida dhismaha kaabasyaasha dhaqaalaha oo iskugu jira garoomada, dekedaha iyo jidadka, isagoo dhinaca kale wax ka tilmaamay hagaajinta hannaanka maamul ee hay’adaha dawladda oo maaliyadda iyo meekhaaminta miisaaniyadda dalka ay ka mid tahay.
Wareysiga aan la yeelanay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ oo aan idinku soo gudbin doono dhawr qaybood, qaybtaan koowaad waxaad ku maqli doontaan arrimo ay ka mid yihiin ka qaybgalkiisii shirkii (Tana Forum) ee dalka Itoobiya, iyo dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo kaasoo madaxweynuhu sheegay in lagu dhisi doono isku tashi dawladda iyo dadweynaha reer Puntland ah.
Hadda wareysigaasi oo uu la yeeshay madaxweynaha Wariye Cabdifitaax Cumar Geeddi, waxaa marka hore uu ku waydiiyey wixii looga hadlay shirkii madaxda Afrika Tana High Level Forum, waxaan uu madaxweynuhu ku jawaabay sidaan.
Dhahar iyo Dhulka Hoosyimaada oo Xareeddu Buux Dhaaftay